Economics » Self-study is the best eductionEconomics
general	စာရေးသူများ ingyinzuzue Organization (အဖွဲ့အစည်း)
အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပြီဆိုတာနဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရှိပြီး ဖြစ်ရပါတယ်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း နေရာတကျစီမံခန့်ခွဲရပါမယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ် လိုအပ်တဲ့ ထိန်းချုပ်မှု့တွေ ရှိရပါမယ်။ ဒီလိုအချက်အလက်တွေ ပြည့်စုံမှု့ ရှိမှ အဖွဲ့အစည်းလို့ ခေါ်နိုင်မှာပါ။
ပြီးတော့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘာလို့ ဖွဲ့ကြသလဲဆိုရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အရာတွေကို စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု့မှ အောင်မြင်မှု့ရနိုင်ဖို့ ဖွဲ့စည်းရခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ခြင်းမှ ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဗဟုသုတကျွမ်းကျင်မှု့တွေ ဖလှယ်နိုင်မယ်။ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်ရတဲ့ အတွက် အလုပ်ပြီးမြောက်မှု့ မြန်လာပြီး အချိန်ကုန် သက်သာလာမယ်။ လုပ်ငန်းက သင်မယ့် အတွေ့အကြုံတွေ ရရှိလာမယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း လုပ်ရင် မရှိနိုင်တဲ့ စွမ်းအားမျိုး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်လျှင် ရရှိလာနိုင်မယ်။ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်လာတဲ့ အတွက် ကျွမ်းကျင်မှု့ ပိုမိုမြင့်လာမယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီလို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်လာလို့ ရမယ့် ကျွမ်းကျင်မှု့ဟာ လုပ်ငန်းမှာ ပျင်းရိဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသွင်ကို ကူးပြောင်းလာတတ်တယ်လို့ အခုခေတ် လုပ်ငန်းတွင်းဆိုင်ရာ လောကမှာ အငြင်းပွားလာပါတယ်။
အခု အဖွဲ့အစည်းတွေ အမျိုးအစားခွဲတာကို ကြည့်ကြရအောင်။ ဒီလို ခွဲခြားလေ့လာတာကို နည်းနှစ်မျိုးနှင့် ခွဲခြားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပထမနည်းကတော့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့  ရည်ရွယ်ချက် (သို့မဟုတ်) အမြတ်ပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲတာပါ။
၁) အကျိုးအမြတ်ကို ရှာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ (profit seeking organization) နှင့်
၂) အကျိုးအမြတ်မဟုတ်တဲ့ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ (Not – For – Profit organization (NFP)) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးပိုင်လုပ်ငန်း၊ အစုရှယ်ယာလုပ်ငန်း နှင့် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများဟာ profit seeking organization တွေ ဖြစ်ပြီး မိဘမဲ့ကလေးကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကြားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများကတော့ NFP တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်း ရဲ့  ရည်ရွယ်ချက် ကွဲပြား ခြားနားသွားတာနဲ့ အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားလည်း ကွဲပြားခြားနားသွားပါတယ်။ အမြတ်ကို အဓိက ထားရှာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုး (သို့) လုပ်ငန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့  ထုတ်ကုန်ကို တိုးမြှင့်ကြမယ်။ market Share များများရဖို့ marketing ပုံစံမျိုးစုံနှင့် အရောင်းတိုးတက်လာအောင် လုပ်ဆောင်မယ်။ NFP တွေကတော့ ရတဲ့ ၀င်ငွေ (Donation စသည်) ပေါ်မှာ ကုန်ကျစားရိတ်ကို တတ်နိုင်သလောက် လျော့ချပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု့ကို ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်မှာပါ။
အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား ခွဲခြားတဲ့ နောက်တစ်နည်းကတော့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ (သို့) ထိန်းချုပ်နိုင်မှု့နှင့် ခွဲခြားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Public Sector Organization : အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း တွေကတော့ တိုင်းပြည် စီးပွားရေးရဲ့  တစိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်ပြီး အစိုးရက အခြေခံ တည်ဆောက် တည်ထောင်ပေးရမယ့် လုပ်ငန်းတွေ ဒါမှမဟုတ် အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Private Sector Organization: ပုဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ အစိုးရရဲ့ တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှု့ အောက်မှာ မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းတွေ ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Co-operatives : စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ လူမှု့ရေးဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု့ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဦးဆောင်ပြီး စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်ဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ ရှိမှသာ အောင်မြင်နိုင်မှာပါ။ ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်းမှာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းက အစပြုလို့ ဌာနဆိုင်ရာ Department တွေ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရဲ့  Externality ဆိုတာကတော့ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ မပါဝင်တဲ့ ပြင်ပလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု့မျိုးကို external benefit လို့ခေါ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက် အကျိုးသက်ရောက်မှု့ကိုတော့ external cost လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဥပမာ – စက်ရုံတစ်ရုံရဲ့  လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု့ကနေ စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေက လေထုညစ်ညမ်းမှု့၊ ရေထုညစ်ညမ်းမှု့ ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ external cost or negative externality ကို ဖြစ်စေတယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဥပမာ- ပျားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှ ပျားတွေမွေးတဲ့ အတွက် ပျားရည်စတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေရရှိတဲ့အပြင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သီးနှံပင်များအပါ် ဝတ်မှုန်ကူးခြင်းဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အတွက် သီးနှံပင်တွေသန်စွမ်းပွားများရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတာကို external benefit or positive externality လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှု့ရောက်ရင် positive externality ဖြစ်ပြီး ဆိုးတဲ့ ထိခိုက်မှု့ရှိတဲ့ သက်ရောက်မှု့ရှိရင်တော့ negative externality ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ special type of externality ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ranking စီလိုက်တဲ့အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဥပမာ- Overeducation သဘောမျိုးပါ။ Labour Market Demand အရ Bachelor အဆင့်ကို လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Master Degree ရ့ပြီးသားလူတစ်ယောက်အလုပ်လျှောက်တဲ့အခါ economically အရ efficient မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် Externality ကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ အဖြေကို လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
ဥပမာ- မူးယစ်ဆေးဝါးကို Public Health Law နဲ့ အညီ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အရ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားခြင်းမျိုးပါ။ ဒါကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်တော့ ရာဇဝတ်မှု့မြောက်စေတဲ့အနေနဲ့ Negative externality ကို တားဆီးပေးခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့လုပ်ငန်းတွေမျိုးမှာဆိုရင် external cost အများကြီးသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့အတွက် ဥပဒေပြဌာန်းခြင်းအားဖြင့် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- အစိုးရက မီးပြတိုက် ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များကို ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- ထုတ်လုပ်မှု့မှ လက်ခံနိုင်လောက်သော အတိုင်းအတာအရ သဘာဝညစ်ညမ်းမှု့ဖြစ်စေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အခွန်စည်းကြပ်မယ်။ နစ်နာမှု့ရှိတဲ့သူတွေကို ထောက်ပံကြေးပေးအပ်ခြင်းနဲ့ externality ကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျော့ချမယ်။
အထက်ပါ အချက်လေးချက်ကတော့ Government Intervention အနေနဲ့ Externalities ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းပါ။
Coase Theorem က Government Intervention မပါဘဲ Externality Control လုပ်ခြင်းကိုတင်ပြထားပါတယ်။
(၁)မူပိုင်ခွင့်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေ သတ်မှတ်ထားနိုင်ရမယ်။
(၂) လူတွေကလည်း ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်စွာ ပြုမူဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်။
(၃) Transaction Cost ကလည်း နည်းနိုင်သမျှ နည်းရမယ်။
ဒီသုံးချက်နဲ့ ညီညွှတ်ရင်တော့ Private Parties တွေအနေနဲ့ Externality Problem တွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့ Coase Theorem က ဆိုပါတယ်။
ဥပမာ- သစ်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်က သစ်တောကို ခုတ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်တဲ့အခါ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ Resortလုပ်ငန်းကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Resort လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အနေနဲ့ သစ်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ ညှိနှိုင်းချက်တွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒီသစ်တောကို Resort လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်က ဝယ်ယူလိုက်မယ်။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင် Coase Theorem အရ ဒီနည်းအားဖြင့် Externality ကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့သော အခြေအနေမျိုးမှာတော့ အသုံးချလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဆိုပါတော့။ စတီးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ သက်ရောက်မှု့အနေနဲ့ ညစ်ညမ်းမှု့ကြောင့် လုပ်သားတွေရဲ့ အဆုတ် ပျက်စီးမယ်။ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်လာနိုင်သည်အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ လုပ်သား ဘယ်လိုမှ ညှိနှိုင်းယူလို့မရတော့ပါဘူး။ လျော်ကြေးပေးတာနဲ့လည်း ကျေအေးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ညစ်ညမ်းမှု့အနေအထားက လက်ခံနိုင်သည်အဆင့်ထက် ကျော်လွန်နေလို့ပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာတော့ Coase Theorem ကို အသုံးပြုလို့မရတော့ဘဲ Government Intervention က ဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: welfare	Read User's Comments(0)
ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာတဲ့ အတွက် အရင်ကထက် ငွေကြေးတစ်ယူနစ်မှာ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ goods and services ပမာဏလျော့ကျလာပါတယ်။ ဥပမာ- အရင်တုန်းက ငွေတစ်ကျပ်နဲ့ ဝယ်လို့ ရတဲ့ ပစ္စည်းကို အခုမှာ ၁၀၀ ပေးပြီး ဝယ်ရတာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ (Inflation) ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဝယ်နိုင်စွမ်းအား (Purchasing Power) လျော့ကျသွားပါတယ်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့က အနည်းငယ်သာဖြစ်ရင်တော့ ကောင်းကျိုး Positive Effect on Economy ဖြစ်စေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လုပ်ခလစာတွေ တိုးလာမယ်။ အမြတ်ပမာဏတွေတိုးလာလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့မြင့်မားလာပြီဆိုရင်တော့ ဆိုးကျိုး Negative Effect on Economy ကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ များလာရင် ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့တွေ လျော့ကျလာမယ်။ ငွေကြေးတန်ဖိုး တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာတဲ့အတွက် ငွေကို စုဆောင်းထားခြင်း မပြုလုပ်တော့ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငွေကို လက်မှာ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ အတွက် ဈေးနှုန်းတွေက တက်လာတဲ့ အခါမှာ အရင် ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ တန်ဖိုးပမာဏကို ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲ တန်ဖိုးလျော့နည်းသွားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာလတိုအတွက် အသုံးပြုရမယ့် အသုံးစားရိတ်တွေမှာ သုံးစွဲမှု့ ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေရှည်မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု့ပမာဏလျော့နည်းလာတဲ့အတွက် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု့ (Economic Growth) မှာ နှောင့်နှေးလာပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ ကာလရှည်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု့ ပမာဏ တိုးတက်လာမှသာလျှင် ရေရှည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု့ကို အကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ သိရပါမယ်)
ဈေးနှုန်းတက်လာတဲ့အတွက် စားသုံးကုန်စည် Consumer Goods တွေရဲ့  ဝယ်လိုအားတွေ ကျလာပါတယ်။ ဒီလို Economic Uncertainty အခြေအနေမျိုးမှာ လုပ်ငန်းတွေဟာ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ခန့်မှန်း ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချဖို့ ပိုပြီး အခက်အခဲတွေ့လာပါတယ်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ကြောင့် ဈေးနှုန်းတွေတက်လာတဲ့အခါ Foreign competitors တွေရဲ့  ယှဉ်ပြိုင်မှု့က များလာပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ ငွေကြေးဖောင်းပွနေတာကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု့လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်တဲ့အခါ ကုန်ကြမ်းစားရိတ်က အစ တိုးလာတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့  ဈေးနှုန်းက မြင့်မားလာပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ပိုမိုခံစားရပါတယ်။ လုပ်ငန်းမှာ အသုံးပြုလည်ပတ်နေတဲ့ Net current Asset နဲ့ Stock တွေကို အစားထိုးဖို့၊ ပြန်လည် ဖြည့်စွမ်းဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အခါ ဈေးတက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင် ရင်းနှီးငွေ ထပ်ထည့်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ငွေကြေးတန်ဖိုးကျသွားတဲ့ အတွက် ချေးငွေတွေရဲ့  တန်ဖိုးကျသွားပြီး ငွေချေးယူသူက ပြန်ဆပ်ရတဲ့ တန်ဖိုးနည်းသွားတဲ့အတွက် အကျိုးခံစားရပေမယ့် ငွေချေးသူက ပြန်ရတဲ့ အခါ နစ်နာမှု့ ခံစားရပါတယ်။
ဘာကြောင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ဖြစ်ပေါ်ရတာလဲဆိုတဲ့ (Cause of Inflation) ကို လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
Keynesian Economic Theory အရ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ ၃ မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။
economy အတွင်းလည်ပတ်နေတဲ့ quantity of money (Money Supply) တိုးလာတာကြောင့် (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကနဲ့ အစိုးရ အခန်းကဏ္ဍအသုံးစားရိတ်တွေ ပိုမိုသုံးစွဲလာတာကြောင့် စုစုပေါင်း ဝယ်လိုအား Aggregate Demand တိုးလာပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်လိုအား Demand ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ Inflation က ဝယ်လိုအားတွေ တိုးတက်လာပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ဈေးကွက်အခြေအနေမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့နဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု့နှုန်းကို လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာစေပါတယ်။
Cost- Push Inflation -
သွင်းအားစုတွေရဲ့  ဈေးနှုန်းတွေတက်လာတာကြောင့် စုစုပေါင်း ရောင်းလိုအား Aggregate Supply ကျဆင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ supply shock Inflation ပါ။ သွင်းအားစုဆိုတာမှာ မြေယာ၊ လုပ်သား၊ အရင်းအနှီး၊ ကုန်ကြမ်း အစရှိတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး သွင်းအားစုတွေရဲ့  ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာတဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်မှု့စားရိတ်တွေ တိုးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေက ထုတ်လုပ်မှု့ကိုလျော့ချရာက ဈေးကွက်အတွင်း ကုန်စည်ပြတ်လပ်မှု့များဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့် ဈေးနှုန်းတက်လာပြီး ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ကို ဖြစ်စေတာပါ။
Built-in Inflation -
အတိတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို အခြေခံပြီး အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ကြိုတင်မျှော်မှန့်းချက်ကြောင့် ဈေးနှုန်းတက်လာခြင်းပါ။ ဥပမာ- ဆိုးရွားတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် စပါးတွေ ပျက်တယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်းမှာ ရှားပါးလာနိုင်တဲ့အတွက် ဈေးနှုန်းတက်မယ်လို့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတာတွေကြောင့် ဆန်တွေကို ပိုမိုဝယ်ယူစုဆောင်း သိုလှောင်ထားမယ်။ ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြောင့် ဈေးနှုန်းတက်ရာက ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပါ။
Keynesians’ view အရ ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ အစိုးရက ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ Fiscal Policy ကို အသုံးပြုပြီး ဝယ်လိုအားတွေကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ အခွန်တွေကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကနဲ့ အစိုးရအခန်းကဏ္ဍသုံးစွဲမှု့ကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ဝယ်လိုအားကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဥပမာ- အများပြည်သူတွေရဲ့  ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု့အတွက် ဆေးလိပ်လုပ်ငန်းတွေကို အခွန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံလိုက်တဲ့အခါ ဒီဆေးလိပ်ကုန်စည်တွေက ပိုမိုဈေးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးလိပ်ရဲ့ ဝယ်လိုအား (သောက်သုံးမှု့အား) ကလည်း ကျဆင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လျော့ချသုံးစွဲစေချင်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့  ဝယ်လိုအားတွေကို ကျဆင်းစေခြင်းမှာ အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းက အဓိက အခန်းကဏ္ဍနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။
Monetarist’s view အရဆိုရင်တော့ အတိုးနှုန်းကို အဓိကထားစဉ်းစားပါတယ်။ အစိုးရဗဟိုဘဏ်မှလည်း အတိုးနှုန်းတွေကို မြှင့်မယ်။ အတိုးနှုန်းမြှင့်မားလာတဲ့အတွက် economy အတွင်းလည်ပတ်နေတဲ့ ငွေကြေးပမာဏ money supply ကျဆင်းလာပြီး ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာပါမယ်။ အဲဒီအခါ ဝယ်လိုအားတွေ ကျဆင်းလာပါတယ်။ ချေးငွေလုပ်ငန်းတွေလည်း ကျဆင်းလာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ချေးယူရတဲ့ အတိုးနှုန်းမြင့်လာတာကြောင့် ချေးယူသူတွေအနေနဲ့ ချေးငွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု့ လုပ်ရင်လည်း ထင်သလောက် အကျိုးအမြတ်မရနိုင်တဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု့ကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ချည်းကပ်လေ့လာနေပေမယ့်လည်း ဖောင်းပွမှု့နှုန်း မြင့်မားလာတဲ့အခါ တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲပါတယ်။
Tags: general	Read User's Comments(0)
ဒီတစ်ခါ ဆင်းရဲမှု့ကို လျော့ချနိုင်စေဖို့ Strategies တွေ အကြောင်း ဆွေးနွေးကြရအောင်။
Economic Growth စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု့က ဆင်းရဲမှု့လျော့ချခြင်းမှာ အများကြီးအရေးပါပါတယ်။ Good Governance က Economic development အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို Good Governance ကို ဘယ်လိုအောင်မြင်အောင် လုပ်မလဲ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ Development policies တွေကို ချမှတ်လမ်းညွှန်ရမယ်။ ဒီ Policies တွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဘယ်လိုဆောင်ရွယ်မယ်. ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ သုံးမလဲ အခြေခံပါတယ်။ ဒီလို အကောင်အထည်ဖော်ရမှာ ငွေကြေးလိုအပ်ချက်တွေကို UNDP လိုမျိုး International Aid Agencies တွေကနေ ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာ အကူအညီအထောက်အပံ့အနေနဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဝင်ငွေခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှု့ကွာဟခြင်းကို Government ကနေ Transfer Payment နည်းလမ်းနဲ့ တနည်းတလမ်း ပြေလည်စေနိုင်ပါတယ်။ Transfer Payment အနေနဲ့ ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာထောက်ပံမှု့တွေပေးခြင်း၊ တချို့သော လုပ်ငန်းတွေမှာ ထောက်ပံမှု့ (subsidies) ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဆင်းရဲမှု့ကို လျော့ချဖို့အတွက် အသုံးများပြီး အောင်မြင်တဲ့ policies ကတော့ သွင်းကုန်တွေကို အစားထိုးခြင်း(Import substitution)နဲ့ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေကို တိုးတက်စေခြင်း(improve export industries)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သွင်းကုန်တွေကို ပြည်တွင်းမှာသာ ထုတ်လုပ်သောကြောင့် နိုင်ငံခြားမှ မှာယူခြင်းမရှိသည့်အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်တွေသက်သာလာပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာပင် ထုတ်လုပ်မှု့လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ချမ်းသာသောနိုင်ငံများသို့ ပို့ကုန်တွေ တင်ပို့နိုင်ဖို့ အစိုးရက ကူညီအားပေးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ပို့ကုန်တွေ တင်ပို့ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။
နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု့မညီမျှခြင်းကို လျော့ချဖို့အတွက် မြေယာခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှု့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသ ဆင်းရဲမှု့ကို လျော့ချပေးနိုင်တဲ့ ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဟာ လုပ်သားတွေအပေါ် အဓိက အားထားတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တာကြောင့် ကျေးလက်လူထုအနေနဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များပြားလာပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းအား မြင့်မားလာနိုင်ပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ လယ်သမားနှင့်တောင်သူတွေဟာ သူတို့ပိုင်မြေယာလေးမှာ တပိုင်တနိုင် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အမြတ်များကို စုဆောင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု့နဲ့ ဆင်းရဲမှု့လျော့ချရေး အတွက် နောက်ထပ် လူသိများတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ စီးပွားရေးအဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ရင်းနှီးငွေအတွက် အသေးစားချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အစိုးရက လယ်သမားတွေ သီးနှံမျိုးစေ့တွေ၊ လယ်ယာစက်ကိရိယာတွေ ဝယ်ဖို့ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်မှတဆင့် ချေးငွေထုတ်ချေးတဲ့ သဘောမျိုးပါ။
အချို့နိုင်ငံတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေကို လူမှု့ရေးဆိုင်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု့ဆိုင်ရာအရ ဖိနှိပ်ထားခြင်းမျိုးရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ အမျိုးသမီးတွေကသာ ပညာရေးနှင့် စီးပွားရေးမှာ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုမိုရရှိခဲ့ရင် လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံဖြိုးမှု့အနေနဲ့လည်း ပိုမိုတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာတတ်အမျိုးသမီးတွေများပြားလာခြင်းက သူတို့ရဲ့  မိသားစုအပြင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ အကျိုးပြုလာနိုင်စေပါတယ်။ သားဆက်ခြားခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအသိပညာ ရှိခြင်းနှင့် မိသားစုစီမံကိန်းများကိုပါ သိရှိကျင့်သုံးလာပြီး ပိုမိုကောင်းတဲ့ ဘဝအနေအထားကို ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ဖွံဖြိုးမှု့ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ(Development Aids)တွေ ရယူတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေက သို့မဟုတ် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဖွံဖြိုးမှု့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပေးအပ်ထောက်ပံ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ(Non-Governmental Organization)ကလည်း သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: welfare	Read User's Comments(2)
1. Public good ဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့  သုံးစွဲခြင်းက တခြားသူတွေရဲ့  သုံးစွဲနိုင်မှု့ကို ထိခိုက်မှု့၊ လျော့ကျမှု့ မရှိနိုင်ကြောင်း ဆိုလိုတာပါ။ တစ်ဦးရဲ့  သုံးစွဲနိုင်မှု့ကို နောက်တစ်ဦးက တားမြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိသလို သုံးစွဲမှု့ကို ဖယ်ထုတ်လို့လည်း မရပါဘူး။ ဥပမာ – မီးပြတိုက်ကို သင်္ဘောတိုင်းက လမ်းညွှန်အဖြစ် အသုံးပြုနေကြပေမယ့်လည်း ဒီမီးပြတိုက်ကို သုံးစွဲနိုင်မှု့ ၊ အသုံးချနိုင်မှု့ အနေအထားလျော့ကျသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ အဲဒီသဘောပါ။
2. Private Good – Public good ရဲ့  ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ Public Good လိုမျိုး Free good သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကုန်စည်ကို ဝယ်နိုင်စွမ်းအားမရှိတဲ့ သူတွေကို အလိုလိုဖယ်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ဦးက သုံးစွဲလိုက်ပြီဆိုရင် နောက်တစ်ဦးက သုံးစွဲခွင့် မရရှိတော့တာမျိုးပါ။ ဥပမာ – ပေါင်မုန့်ကို လူတစ်ယောက်က စားသုံးလိုက်ပြီးဆိုရင် အဲဒီစားသုံးလိုက်တဲ့ ပေါင်မုန့်ကို နောက်လူတစ်ယောက် စားသုံးခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။
3. Inferior Good – ကုန်ညံ့ ဖြစ်ပါတယ်။ စားသုံးသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေတိုးတက်လာပြီဆိုရင် အဲဒီကုန်စည်ရဲ့  ဝယ်လိုအား ကျဆင်းသွားတာပါပဲ။ မဖြစ်မနေအဖြစ်သာ ဒီကုန်စည်ကို စားသုံးရတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
4. Normal Good – Inferior good နဲ့  ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ စားသုံးသူရဲ့  ဝင်ငွေတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ကုန်စည်ရဲ့  ဝယ်လိုအားလည်း တိုးတက်လာတဲ့ ကုန်စည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
5. Substitute Good – တစ်ခုမရှိရင် တစ်ခု အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ကုန်စည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Law Of Demand အရ ကုန်စည်တစ်ခုရဲ့ ဈေးနှုန်းတက်လာရင် ထိုကုန်စည်ကို ဝယ်ယူမှု့နည်းပါးလာပြီး အစားထိုးကုန်စည်ရဲ့  ဝယ်လိုအားတက်ပါမယ်။ ဒါကို Substitution Effect လို့ ခေါ်ပါတယ်။
6. Complementary Good – တွဲဖက်စားသုံးရတဲ့ ကုန်စည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်စည်တစ်ခုရဲ့  ဈေးနှုန်းတက်တယ်ဆိုရင် သူနဲ့ တွဲဖက်စားသုံးရတဲ့ ကုန်စည်ရဲ့  ဝယ်လိုအားကလည်း အလိုလို လိုက်ကျမှာဖြစ်တယ်။
7. Necessity Good- Normal good နဲ့ ပုံစံတူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုးတက်လာတဲ့ ဝင်ငွေနှုန်းထက် တိုးလာတဲ့ demand က နည်းပါတယ်။ ရေ၊ အစားအစာစတဲ့ အခြေခံကျတဲ့ကုန်စည်တွေ၊ မရှိရင် ကျွန်မတို့ အသက်ရှင်နေထိုင်လို့မရတဲ့ ကုန်စည်မျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
8. Luxury Good – ဝင်ငွေတိုးတက်လာမှု့နှုန်းထက် ပိုမို Demand ပိုမိုတိုးတက်လာတဲ့ ကုန်စည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
9. Durable Good – တခါဝယ်ထားရုံနဲ့ အချိန်အတော်ကြာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ကုန်စည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
10. Neutral Good – ဝယ်လိုအားက ဝင်ငွေ အပေါ် မှီတည်ခြင်းမရှိတဲ့ ကုန်စည်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
11. Giffen Good – ကုန်စည်ရဲ့  ဈေးနှုန်း တက်လာသော်လည်း ထိုကုန်စည်ရဲ့  ဝယ်လိုအားတက်လာတဲ့ ကုန်စည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Law of Demand နဲ့ Substitution Effect မသက်ရောက်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစားထိုးသုံးမယ့် ကုန်စည်မရှိတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်မှာ ဈေးပိုတက်လာမှာစိုးတဲ့ အတွက် အခု ဈေးတက်လာသော်လည်း ပိုမိုဝယ်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
12. Capital Good – သုံးစွဲနိုင်မယ့် တခြားကုန်စည်(other products for consumption)တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ အသုံးပြုရတဲ့ ကုန်စည်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကားကို သာမာန်အားဖြင့် consumer good အနေနဲ့ မြင်ကြပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်က အသုံးပြုတယ်ဆိုရင် ဒါက consumer good ပါ။ ဒါပေမယ့် truck ကားလိုမျိုး ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ အသုံးပြုတယ်ဆိုရင် ဒီ truck ကားဟာ capital good ဖြစ်ပါတယ်။
13. Intangible Good – ကိုင်တွယ်ထိတွေ့လို့ မရတဲ့ ကုန်စည်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို service နဲ့ ရောထွေးမမြင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ – ဆံပင်ညှပ်တာမျိုးက service ပေးတာပါ။ လုပ်သား (labour) က လုပ်ပေးတာမျိုးပါ။ Intangible good ကတော့ ကိုင်တွယ်လို့မရတဲ့ အရာဝတ္ထု (object) ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- Internet ကနေ download လုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေ ၊ စာအုပ်တွေ၊ သီချင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
14. Free Good – ရှားပါးမှု့မရှိတဲ့ ကုန်စည်မျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ အဲဒီကုန်စည်ကို သုံးစွဲမှု့အတွက် zero Opportunity cost ပဲဖြစ်ရပါမယ်။ အလကားရတာမျိုးကို မဆိုလိုပါဘူး။ ဥပမာ – promotion တစ်ခုက ပစ္စည်းလက်ဆောင်ရတာမျိုးက free good မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီကုန်စည်က ရှားပါးအရင်းအမြစ် (Scarce Resources)တွေကို အသုံးပြုထားရင် အလကားရပေမယ့်လည်း ဒါ free good မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ရဲ့  တီထွင်မှု့ (ဥပမာ- software) တစ်ခုကို တခြားသူတွေအားလုံးက အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုလို့ ကုန်ခမ်းသွားခြင်းမရှိလည်း မရှိရပါဘူး။ အဲဒီလိုကုန်စည်မျိုးကို free good လို့ခေါ်ပါတယ်။
15. Merit Good ကတော့ အခုခေတ်ကာလမှာ အသုံးနည်းတဲ့ ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ Richard Musgrave (1957, 1959) က စတင် အဆိုသွင်းတဲ့ concept ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ concept ရဲ့  အခြေခံကတော့ ပေးနိုင်စွမ်း(Ability)နဲ့ ပေးချင်တဲ့ စွမ်းအား(Willingness to pay) ထက် လိုအပ်ချက်ကို အဓိက ထားတာပါ။ ဥပမာ – အစိုးရက ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေ၊ စောင့်ရှောက်မှု့တွေ၊ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်တာမျိုးက Merit Good မှာပါဝင်ပါတယ်။
Tags: general	Read User's Comments(4)
Management theory တွေထဲမှာ လူသိများတဲ့ Theory X နဲ့ Theory Y အကြောင်းကိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ဒီ Theory ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့လူက – Douglas McGregor ဆိုသူဖြစ်ပြီး ဒီ theory ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ လူတွေရဲ့ nature အပေါမှာလိုက်ပြီး management style ကိုပြောင်းလဲသင့်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။အဓိကအားဖြင့်တော့ Theory X က negative view ဖြစ်ပြီး Theory Y က positive view ဖြစ်ပါတယ်။
Theory X အရ လူတွေဟာ အလုပ်လုပ်ရမှာ မကြိုက်ဘူး၊ အလုပ်ကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ချင်တယ်၊ တာဝန်(responsibility ) ယူချင်စိတ်မရှိဘူး၊ စသည်ဖြင့် human nature အပေါ်မှာ အဆိုးမြင်ရှုထောင့်ကနေကြည့်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလိုပုံစံရှိတဲ့လူတွေကို အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာ Manager ဒါမှမဟုတ် Supervisor တွေအနေနဲ့ တင်းကျပ်တဲ့အမိန့်တွေပေး ရမယ်၊ တိကျတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသတ်မှတ် ရမယ် ၊ ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်မကျေရင် အပြစ်ပေးရမယ် စသည်ဖြင့်အလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာ force လုပ်ပြီး အုပ်ချုပ်ဖို့ ဆိုထားပါတယ်။
Theory Y ကတော့ X နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။ ဒီ theory အရလူတွေဟာ human nature အရကို အလုပ် လုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်၊ ကိုယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလဲ တာဝန်ယူချင်စိတ် ရှိတယ်၊ အထက်လူကြီးကတာဝန်ပေး ရင်လဲ ကြေပြွန်အောင် ထမ်းဆောင်တယ်၊ အလုပ်လုပ်ရမှာကို လဲ လူ့ဘ၀ရဲ့ natural activity လို့လက်ခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီလိုလူတွေကို manage လုပ်တဲ့အခါမှာ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်း တွေပေးမဲ့အစား သူတို့မှာရှိတဲ့ အလုပ်လုပ်ိချင်စိတ်ကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် ရောင်အောင်တွန်းအားပေးဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာက organization က ရည်ရွယ်ထားတဲ့ organizational goal ပေါ့။
ဥပမာ အနေနဲ့- အရောင်းမြှင့်တင်ရေး project တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုပါစို့။ Theory Y nature ရှိတဲ့လူတွေကို အုပ်ချုပ်ရတဲ့ manager တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဆီက အကြံတွေတောင်းမယ် ၊idea တွေတောင်းမယ် ၊ ဒီ project ကိုအောင်မြင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ plan ချတဲ့နေရာမှာ ၀န်ထမ်းတွေကိုပါ ပါဝင်ခိုင်းမယ်၊ စသည်ဖြင့် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ အလုပ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာပါ။
Theory X style ရှိတဲ့ လူတွေကို အုပ်ချုပ်ရတဲ့ အခါမှာတော့ ၀န်ထမ်းတွေကို ဒီလို project အကောင်အထည်ဖော်ချင်လို့ အကြံလေးပေးကြပါ ဆိုပြီး တာဝန်ပေးလိုက်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။
Manager ကိုယ်တိုင်က တိကျတဲ့ plan ကိုချပေးရပါမယ် ဒါ့အပြင် ၀န်ထမ်းတွေကို ဘယ်သူက ဘာဝန် ယူရမယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ် (detail ) တာဝန်တွေကိုပါ သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်။ အဲဒီ တာဝန်တွေ မကျေရင်လဲ ဘယ်လို အပြစ်ဒါဏ် (punishment ) တွေပေးမယ်ဆိုတာကိုပါ တစ်ခါထဲပြောရမယ် ၊ ပြီးရင်လဲ တိတိကျကျ လုပ်မလုပ် ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
အဲဒီတော့ အဓိက အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ Manager (သို့) အလုပ်တစ်ခုကို စီမံအုပ်ချုပ်ရတဲ့ လူနေနဲ့ ကိုယ့်လက်အောက်က၀န်ထမ်းတွေဟာ Theory X style ရှိတဲ့ လူတွေလား ဒါမှမဟုတ် Theory Y style ရှိတဲ့လူတွေလားဆိုတာ သေသေချာချာသိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ အဲဒါမှ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ organizational goal ရောက်အောင် သင့်တော်တဲ့ management style ကို သုံးပြီးအုပ်ချုပ်နိုင်မှာပါ။
Economy မှာ အကန့်အသတ်နဲ့ ရှိတဲ့ ရှားပါးသံယံဇာတ အရင်းအမြစ်တွေ ( limited Scarce Resources) တွေကို အကောင်းဆုံး အကျိုးအမြတ်ရအောင် ဘယ်လိုခွဲဝေအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို ပထမဦးစွာလေ့လာကြည့်ရအောင်။
အခြေခံအရင်းအမြစ်တွေကတော့ အကြမ်းအားဖြင့် Physical Resources တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Economy မှာ အဲဒီ Physical Resources တွေက အကန့်အသတ်နဲ့ သာ ရရှိနိုင်တာပါ. Limited Resources လို့ ဆိုရာမှာ မြေယာ (Land) ၊ လုပ်သား (Labour)၊ အရင်းအနှီး(Capital) နဲ့ လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်တဲ့ တခြားအချက်အလက် (Other Factors) တွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ – လယ်သမားတစ်ယောက်က စပါးနဲ့ ဂျူံကို စိုက်မယ်ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာ မြေယာက အကန့်အသတ်နဲ့ သာရှိတာမို့ မြေယာက Limited Resources ဖြစ်ပြီး တစ်ခုကိုရွေးဖို့ တစ်ခုကို စွန့်လွှတ်ရပါမယ်။ အဲလို ရွေးချယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ တစ်ခုရဲ့ စွန့်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ ပမာဏကို ရွေးချယ်မယ့် တစ်ခုရဲ့  အမြတ်က သာလွန်နေမှ ရွေးချယ်ဖို့ သင့်ပါတယ်။ အဲဒီ စွန့်လွှတ်လိုက်ရမယ့် (Profit forgone) ကို Opportunity Cost လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Opportunity Cost နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်။
ရှေ့က ဥပမာနဲ့ ဆက်ပြောကြရအောင်။ စပါးကို တိုးစိုက်ရင် ဂျူံကို လျော့စိုက်ရမယ်။ တစ်ခုတိုးရင် တစ်ခုက လျော့ရမယ်။ စပါးပဲ စိုက်မယ်ဆိုရင် ၄ တန် ထွက်နိုင်မယ်ဆိုကြပါစို့။ ၃ တန်ကိုလျော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင် ဂျူံကို ၃.၈ တန်အထိ တိုးပြီး စိုက်ပျိုးနိုင်မယ်။ ဒါဆိုရင် ဂျူံ ၃.၈ တန်ကိုရဖို့အတွက် Opportunity Cost က စပါး ၁ တန် ဖြစ်ပါတယ်။ (သို့မဟုတ်) စပါး ၁ တန်အတွက် Opportunity Cost က ဂျူံ ၃.၈ တန်နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လုပ်ငန်းတွေ အနေနဲ့ Choice ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ရှေ့က ပြောခဲ့သလိုပါပဲ. အမြတ်နှစ်ခုယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် သာနေတာကို ရွေးချယ်လို့ Real Profit ကို ရရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Decision Making က မှန်ကန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Opportunity Cost ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး Profit ၂ ခု ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး များတာကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။ သဘောကတော့ (Profit – Opportunity Cost) ကို နှိုင်းယှဉ်ရမှာပါ။
လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ မဟုတ်ပဲ Economy တစ်ခုလုံးမှာလည်း သယံဇာတအရင်းအမြစ်ရှားပါးမှု့ (Scarce Rescources) တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကောင်းဆုံး အသုံးပြုနိုင်ဖို့နဲ့ အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ကြရမှာ Economy မှာဆိုရင်တော့ Growth အနေနဲ့ပဲ ကြည့်ကြရပါမယ်။ လက်ရှိစားသုံးနိုင်မှု့ (Current Consumption) ထက် အနာဂတ်လိုအပ်ချက် (Future Needs) အတွက် ဘယ်လောက် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သလဲဆိုတဲ့ Growth ကို စဉ်းစားရပါမယ်။ (ဥပမာ- လက်ရှိမှာ ပိုမိုစားသုံးလိုက်တဲ့အခါ အနာဂတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့ နည်းသွားလိမ့်မယ်။ လက်ရှိမှာ လျော့စားသုံးလိုက်ရင် နောင်တစ်ချိန်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု့အတွက် စုဆောင်းမှု့ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်)။ လူမှု့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့  ရွေးချယ်မှု့အပေါ်မူတည်ပြီး Economy မှာဘယ်လောက် တိုးတက်မှု့ (Growth) မြန်သလဲဆိုတဲ့ သက်ရောက်မှု့ရှိမှာပါ။
Tags: general	Read User's Comments(2)